Salut à Toi ngwa na netwọkụ mmekọrịta maka ịdị na-ekwukọrịta okwu | Site na Linux
Daalụ Toi (AKà) bụ ngwa nkwukọrịta multifunctional na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta Wepụtara n'okpuru ikikere ngwanrọ bụ free AGPLv3 +. Na-eji XMPP, nke emere maka izipu ozi na nkata, arụpụtara ọrụ ndị ọzọ enwere ike iji maka microblogging, ịde blọgụ, ịkekọrịta faịlụ, ọdịyo na vidiyo vidiyo, na egwuregwu. O nwere ederede Atom na WYSIWYM na WYSIWYG editọ.
Salut à Toi na-eji ụlọ ọrụ ihe nkesa ndị ahịa. The ahịa mejupụtara a daemon ndabere (nke nwere ike arụnyere na mpaghara ma ọ bụ na ihe nkesa) na otu onye nke ọtụtụ frontends.
jp: usoro ntinye iwu
Cagou: interface maka kọmputa desktọọpụ na ekwentị mkpanaaka
Libervia: ntanetị weebụ
Primitivus: interface ederede dabere na onye ọrụ.
Agba nke atọ gụnyere:
Wix: WxWidgets based desktop GUI (nke ugbu a)
Bellaciao - GUI nke dabeere na Qt (mmepe na njide)
Sententia: interface Emacs (mmepe ugbu a)
Ugbu a Salut à Toi dị na ụdị ya 0.7 na nkwadebe nke nsụgharị a mere ihe karịrị afọ atọ na nke ahụ bụ nke mbụ a na-akpọ «ọha na eze», nke ndị na-abụghị teknụzụ nwere ike iji ya mee ihe, ọbụlagodi na a ka nwere ndozi ka a ga-eme n'ọkwa nke interface na »njirimara onye ọrụ» .
1 Main ọhụrụ atụmatụ nke version 0.7
1.1 Izuzo na njedebe
1.2 Ntanetị weebụ
1.3 Mkparịta ụka vidiyo
1.4 Melite ịkekọrịta faịlụ
2 Etu esi etinye Salut à Toi na Linux?
Main ọhụrụ atụmatụ nke version 0.7
Na mbipute a Cagou, interface maka desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka, natara ụfọdụ mmelite ọ bụ ezie na ruo na ụfọdụ ndị mmepe na-ekwu na ngwa ka na-ata ahụhụ site na ụfọdụ nwayọ nwayọ na mgbe ụfọdụ ọbụna mkpọka. A ga-edozi nsogbu dị iche iche na ọdụ ụgbọ mmiri na Python 3.
Izuzo na njedebe
Agbanyeghị SàT ejirila ihe nzuzo zoro ezo ruo ọtụtụ afọ site na OTR, mbipute a na-ahụ ọbịbịa nke «OMEMO», algorithm nke na-emeri ntụpọ nke gara aga (Ọ na-enye ohere ọkachasị iziga ozi ezoro ezo na offline, ma ọ bụ gosipụta ha na ọtụtụ ngwaọrụ).
OMEMO na emejuputa atumatu na mkparita uka di nkpa (dika “1: 1”, n’etiti mmadu abuo) n’oge a, ma nsụgharị nke n’abia biara gha ahukwa azumazu otu mkparita uka na nzuzo.
Ugbu a ị nwekwara ike ịmepụta ma jikwaa ihe omume (ezinụlọ, dịka ọmụmaatụ), na ndepụta ndị ọbịa mara mma na azịza ndị a na-ahụkarị.
Enwere ike ịmepụta na ịkekọrịta foto ọba, iche iche faịlụ. Okike esiteghi na eserese eserese, ọ bụ mmụba ịkọ ngwa ngwa; ize, n'aka nke ọzọ, dị mfe site na Libervia (ntanetị weebụ).
Mmepe nke Libervia, ntanetị weebụ, dugara ya na ntanetị weebụ. Ihe kpatara ngbanwe a bụ na ọ chọrọ interface dị nro, nke na-eme ka ọ dị mfe itinye ma nwalee echiche ma ọ bụ atụmatụ ọhụụ.
Ebumnuche bụ ịnweta usoro nhazi na usoro gọọmentị (n'ihi na ọ dabere na XMPP), nke na-etinye ọnụ n'ime usoro okike.
Jingle dịlarị, a na-eme atụmatụ mkparịta ụka vidiyo ogologo oge. Okwesighi ịbụ ihe siri ike itinye n'ọrụ maka ntanetị (ekele maka WebRTC), mana ọ ga-achọ ọrụ ọzọ na desktọọpụ na gam akporo.
Melite ịkekọrịta faịlụ
SàT na-enyerịrị òkè faịlụ dị elu (karịa naanị iziga faịlụ na ihe nkesa), gụnyere ihe nkesa. O kwere omume na mmepe ga-aga n'ihu na nke a.
Etu esi etinye Salut à Toi na Linux?
Iji wụnye Salut à Toi na nkesa gị, ị ga-agbaso ntuziaka ndị anyị kesara n'okpuru.
Naanị ịnweta nkwado Flatpak na distro gị iji wụnye nke ọ bụla n'ime ihe ndị na-eso azụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ya ma ọ bụ chọta njikọ maka ntinye na android ma ọ bụ ndị ọzọ. Gaa na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Salut à Toi ngwa na netwọkụ mmekọrịta maka ekwuputaghị ozi
Ọzọ ... Ọ bụ nro nke ngwanrọ n'efu, ọrụ 50 nke na-arụ otu nzube na ihe niile na-adị ọkara-eme, juputara na chinchi, ezughị oke na mgbe niile na steeti pre-alpha na-adịgide adịgide, kama otu ọrụ abụọ 50 ma ọ bụ 25 ugboro ka mma na ha niile iche iche na ogo zuru oke nke ọkachamara iji merie ihu na ihu na nnukwu ikike ahịa. Bịa, akwụsịla oriri ahụ. Ka anyị lee ihe bụ mmemme ozi ọzọ ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ egwu na-esote nke na-agaghị enye aka ihe ọ bụla na ihe dị adị ma ga-anwụ nke agbahapụ n'ime afọ ole na ole ... Kewaa & ọchịchị, ndị Latinos kwuru ...
Mana mmejọ nke imirikiti ndị ọrụ kọmputa "agụghị akwụkwọ" na ọ nweghị onye nwere ike ịkwaga ha na windo anaghị atụkwasị obi na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ na ndị nrụpụta, ndị na-eji kọmputa ha bụ Windows ... Chọpụta, jide n'aka ...
Emeputara ohuru nke CMake 3.15 edeputara ihe